OTU ESI HAZIE NETWỌK NA NETWỌK NA WINDOWS 7 - OTU ESI ACHỌTA EBE Ọ BỤ, IHE KPATARA KỌMPUTA JI AGBACHAPỤ, NTỤZIAKA NA NSETA IHUENYO - WINDOWS - 2019
Otu esi emepụta na jikwaa ebe netwọk na Windows 7
Netwọk dị na mpaghara ahụ nwere ọkwa, ọrụ ndị dị n'elu na ịgbanwee modulu ejikọtara site na wires dị iche iche. Agbanwe mgbanwe ọsọ ọsọ na ọnụọgụ nke data a na-ebute na netwọk na-ekpebisi ike site n'usoro mgbanwe, na ọrụ nke ngwaọrụ ma ọ bụ gbanwee nwere ike iji. Ọnụ ọgụgụ nke ebe ọrụ na netwọk na-ekpebi site na ọnụnọ ọdụ ụgbọ mmiri eji jikọọ na ngwaọrụ mgbagharị. A na-eji netwọk mpaghara eme ihe n'otu nzukọ ahụ ma na-ejedebe na obere mpaghara. Ha na-ekenye netwọk ndị ọgbọ na ndị ọgbọ, bụ ihe dị mma iji rụọ ọrụ mgbe enwere kọmputa abụọ ma ọ bụ atọ na ụlọ ọrụ, na netwọk na ihe nkesa raara onwe ya nye nke nwere njikwa nlekọta. Iji nlezianya jiri netwọk kọmputa na-enye ohere ka e mepụta ebe netwọk dabere na Windows 7.
Kedu ka gburugburu netwọk si Windows 7: rụọ ma jiri
Chọta Mgbakwunye Network na Windows 7
Video: hazie netwọk na Windows 7
Esi lelee njikọ
Video: otu esi lelee ohere ịntanetị
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ekwusighi netwọk Windows 7
Kedu ihe na-ejighị emepụta ihe nchọgharị netwọk
Ihe kpatara kọmputa na-efu na gburugburu netwọk na otu esi edozi ya
Video: ihe ị ga - eme mgbe arụghị ọrụ na netwọk
Otu esi enye ohere inweta ebe obibi
Nzọụkwụ iji zoo gburugburu ebe nrụọrụ weebụ
Ugbu a, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ụlọ ọrụ, ụlọọrụ ma ọ bụ nnukwu nzukọ nke na-ejikọta kọmputa na ngwaọrụ elu n'otu netwọk kọmputa.. Dịka iwu, netwọk a na-arụ ọrụ nanị n'ime nzukọ ma na-eje ozi maka mgbanwe nke ozi n'etiti ndị ọrụ. Netwọk dị otú a bụ njedebe a na - akpọ ya intranet.
Otu intranet ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ a na - akpọ intranet bụ netwọk n'ime etiti nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke na - arụ ọrụ n'iji Usoro Ịntanetị TCP / IP (usoro iwu maka izipu ozi).
Onye na-achọpụta ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ na ngwa ngwa, ọ ga-ezuru ya ịchọpụta nkwụsịtụ nke ngwa ngwa na ngwanrọ. Ndabiihu na mmejọ niile na intranet na-agbada na ihe ole na ole. N'ime ọtụtụ ọnụ ọgụgụ, ụlọ ọrụ intranet na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ihe kpatara nkwụsịtụ na iwepu ya site na algorithm mbụ e mepụtara.
Ọnọdụ netwọk na Windows 7 bụ mpaghara nke usoro, ihe ngosi nke a nwere ike igosipụta na desktọọpụ n'oge ntọala mbụ, mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Site n'iji njirimara eserese nke akụrụngwa a, ị nwere ike ịlele ọnụnọ nke ụlọ ọrụ na intranet mpaghara na nhazi ha. Iji lelee nbanye ọrụ na intranet kere na Windows 7, iji chọpụta njikere ha maka izipụ ma nata ozi, yana nhazi ntọala, e mere atụmatụ nhazi nke Network Network.
Nke a na-enye gị ohere ịlele aha ebe a na-arụ ọrụ na intranet, adreesị netwọk, ịkọwa ikikere ohere ịnweta ndị ọrụ, mma nke na intranet ma dozie njehie ndị na-eme n'oge ọrụ netwọk.
Enwere ike ịmepụta intranet n'ụzọ abụọ dị iche iche:
"kpakpando" - ọrụ niile na-ejikọta na router ma ọ bụ netwọk netwọk;
Kọmputa niile ejikọtara na ngwaọrụ nkwurịta okwu.
"mgbanaka" - niile ọrụ ọ bụla na-ejikọta onwe ha na usoro, na-eji kọntaktị abụọ.
Kọmputa jikọọ na-eji kọntaktị netwọk
Ịchọta ebe obibi netwọk bụ usoro kwadoro n'ụzọ doro anya ma rụọ ọrụ mgbe ebutere ọrụ na mbụ na ụlọ ọrụ dị ugbu a ma ọ bụ intranet ụlọ ọrụ.
Iji chọọ ebe netwọk dị na Windows 7, ịkwesịrị ịrụ ọtụtụ usoro maka otu algorithm nyere:
Na "Desktọpụ" pịa okpukpu abụọ na label "Network".
Na "Desktọpụ" ugboro abụọ pịa akara ngosi "Network"
Na ngalaba a gbasaa, chọpụta ebe ọrụ nwere intranet mpaghara. Pịa taabụ "Network and Sharing Center" taabụ.
Na ngalaba netwọk, pịa taabụ "Network and Sharing Center"
Na "Network and Sharing Center" tinye taabụ "Gbanwee ntọala nkwụnye."
Na nchịkọta, họta "Ngbanwe ntọala ngbanwe"
Na "njikọ netwọk", họrọ nke ugbu a.
Kpebie netwọk kere
Mgbe arụmọrụ ndị a gasịrị, anyị na-achọpụta ọnụọgụ ọrụ, aha intranet na nhazi nke ọrụ.
Tupu ịmepụta intranet ahụ, a na-agbakọ ogologo nke eriri waya eriri iji jikọọ ọrụ ọrụ na wiwe wired ma ọ bụ netwọk netwọk, ma a na-eme ndokwa iji dozie usoro nkwukọrịta, gụnyere ịgbatị njikọta na ịwapụta netwọk netwọk site na ọrụ ọrụ na onye na-azụlite netwọk.
Na intranet mpaghara, dịka iwu, ụlọ ọrụ dị na ụlọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị n'otu. A na-enye channelụ nkwurịta okwu site na njikọ njikọ ma ọ bụ site na wireless (Wi-Fi).
Mgbe ị na-emepụta intranet kọmputa site na iji eriri nkwurịta okwu wireless (Wi-Fi), a na-ahazi ọrụ ọrụ site na iji ngwanro gụnyere na router.
Wi-Fi adịghị ehichapụ n'ụzọ ọ bụla, ma megide njehie zuru oke. Aha a abughi abbreviation ma ekere ya iji mee ka ndi mmadu nweta ndi mmadu, na-etibi okwu ahu Hi-Fi (site na English High Highness).
Mgbe ị na-eji eriri nkwurịta okwu arụnyere, a na-ejikọ njikọ na njikọ LAN nke kọmpụta na mgbanwe netwọk. Ọ bụrụ na wuru intranet site na iji kaadị netwọk, mgbe ahụ, a na-ejikọ ọrụ ebe na mgbanaka mgbanaka, otu n'ime ha na-enyefekwa ohere ụfọdụ iji kee otu netwọk netwọk.
Maka intranet iji rụọ ọrụ zuru oke, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ikike ịgbanwe ngwugwu ozi na ụlọ ọrụ intranet ndị ọzọ niile.. Iji mee nke a, isiokwu nke intranet ọ bụla chọrọ aha na adreesị netwọk pụrụ iche.
Mgbe ịchisịrị njikọ nke ọrụ na ịhazi n'ime intranet dị n'otu, a na-ejikọta nke ọ bụla na njikwa njikọ onye ọ bụla iji mepụta ọnọdụ maka ịrụ ọrụ nke ọma.
Isi njikọ na ịtọ ntọala nhazi bụ imepụta adreesị netwọk pụrụ iche.. Ị nwere ike ịmalite ịhazi ihe intranet ahụ site na ọrụ ịchọtaghị ịhọrọ. Site na ịhazi nhazi ahụ, ịnwere ike itinye ihe nrịba nke a-site-nzọụkwụ algorithm:
Gaa na ọrụ "Network and Sharing Center".
Na nchịkọta dị n'aka ekpe, họta "Ngbanwe ntọala ngbanwe"
Pịa na "ntọala nkwụnye mgbanwe" taabụ.
Ụlọ ọrụ ahụ gbasaa egosiputa njikọ dị na ọrụ.
Na njikọ netwọk, họrọ ihe achọrọ
Họrọ njikọ ahọrọ maka iji mee ihe mgbe ị na-agbanwe ihe ngwugwu nke ozi na intranet.
Pịa bọtịnụ òké aka na njikọ yana na menu ndabụ pịa akara "Njirimara".
Na ndokwa njikọ, pịa akara "Njirimara"
Na "Njirimara Njikọ" lelee mmewere "Protocol Internet Version 4" wee pịa bọtịnụ "Njirimara".
Na njirimara netwọk, họrọ mpaghara "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) ma pịa bọtịnụ" Njirimara "
Na "Njirimara Njikwa ..." gbanwee uru na akara "Jiri adreesị IP na-esonụ" wee banye "Adreesị IP" uru - 192.168.0.1.
Na "Subnet Mask" tinye uru - 255.255.255.0.
N'ime "Njirimara Njirimara ...", tinye ụkpụrụ nke adreesị IP na mkpuchi subnet
Mgbe setịpụrụ ntọala ahụ, pịa igodo OK.
Anyị na-arụ otu ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ niile na intranet. Ihe dị iche n'agbata adreesị ahụ ga-adị na akara ikpeazụ nke adreesị IP, nke ga-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ị nwere ike ịtọ nọmba 1, 2, 3, 4 na.
Ụlọ ọrụ ga-enweta Intanet ma ọ bụrụ na i tinye ụfọdụ ụkpụrụ na "Ọnụ ụzọ Nhọrọ" na "ihe nkesa DNS". Ịkpọ okwu eji mee ihe maka ọnụ ụzọ na DNS ga-ejikọta adreesị nke ọrụ ahụ na ikikere ịnweta Ịntanetị. N'ebe ntaneti Ịntanetị, a na-egosi ikikere iji jikọọ na Ịntanetị maka ọrụ ọrụ ndị ọzọ.
Online, emebere na ntanetị nkwurịta okwu redio, ụkpụrụ nke ọnụ ụzọ ámá na ntanetị DNS dị ka ihe ntanetị Wi-Fi pụrụ iche, nke arụnyere ka ọ rụọ ọrụ na Ịntanetị.
Mgbe ejikọtara na intranet, Windows 7 na-enye ịhọrọ nhọrọ maka ọnọdụ ya:
"Netwọk ufọk" - maka ụlọ ọrụ na ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ;
"Ụlọ ọrụ Enterprise" - maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ;
"Netwọk ọha na eze" - maka ụlọ ọrụ, hotels ma ọ bụ subways.
Nhọrọ nke otu n'ime nhọrọ na-emetụta ntọala netwọk nke Windows 7. Ọ dabere na nhọrọ ahụ a họọrọ ka esi etinye ihe ndị a na-etinye aka na ihe mgbochi na ụlọ ọrụ ndị jikọtara na intranet.
Ozugbo nhazi, nhazi nke njikọ nke akụkụ niile nke intranet na-enyocha.
Ma ọ bụ ma ọ bụ na ejighị ya na njikọ ahụ ka a na-enyocha site na iji ping utility wuru n'ime Windows 7. Maka nke a, ịchọrọ:
Gaa na "Run" panel na "Standard" ọrụ nke menu Malite.
Ruo ugbu a, ụzọ kachasị adaba iji chọpụta njikọ kọmputa na netwọk bụ iji ping n'etiti ụlọ ọrụ. Azụlite obere ping utịp maka netwọk mbụ nke na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi nke arụmọrụ diski, ma ka na-abaghị uru.
Na "Open" ubi jiri iwu ping.
Na panel "Gbaa ọsọ" tinye iwu "Ping"
Onye nchịkwa "Nchịkwa Iwu" ga - amalite, ikwe ka ị rụọ ọrụ na iwu DOS.
Tinye adreesị pụrụ iche nke ọrụ ahụ site na ohere, njikọ nke a ga-enyocha wee pịa bọtịnụ Tinye.
Tinye adreesị IP nke kọmputa a ga-enyocha na njikwa.
A na-atụle nkwurịta okwu iji rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na njikwa ahụ na-egosiputa ozi gbasara izipu na ịnweta ngwugwu IP enweghị ihe ọmụma.
N'ebe ụfọdụ na ọdụ ụgbọ mmiri, njikwa ahụ na-egosi ịdọ aka ná ntị "Ederede" ma ọ bụ "Onye ahụ a kpọrọ aha anaghịzi adị."
Nkwurịta okwu n'etiti ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ
A na-eme otu nchọpụta ahụ na ọrụ ọrụ intranet niile. Nke a na-enye gị ohere ịchọpụta mmejọ na njikọ ma malite iwepu ha.
N'ọtụtụ ọnọdụ, enweghi nkwurịta okwu n'etiti ụlọ ọrụ n'otu mpaghara, dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ, ndị ọrụ na-akpata ya, ọ bụkwa nke a na-arụ ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ nkwụsị na waya jikọtara ngwaọrụ mgbagharị na ọrụ, yana nkwenye siri ike nke njikọ ahụ na ọdụ netwọk nke kọmpụta ma ọ bụ gbanwee. Ọ bụrụ na netwọk na-arụ ọrụ n'etiti ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị iche iche, mgbe ahụ enweghi ike ịba uru, ma eleghị anya, ọ bụ maka nsogbu nke nzukọ ahụ na-eje ozi n'ebe dị anya.
E nwere ọnọdụ mgbe ejirila intranet zuru ezu ma nwee ohere na Ịntanetị, na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ adịghị egosi na interface ngosi. N'okwu a, ịchọrọ ịchọta ma dozie njehie ahụ na ntọala.
Ụzọ kachasị mfe iji kpochapụ njehie ahụ:
Na "Ogwe njikwa" pịa akara ngosi "Nchịkwa".
Na "Ogwe njikwa" họrọ ngalaba "Nchịkwa"
Na "nchịkwa" pịa na taabụ "Iwu Nchebe Obodo".
Họrọ ihe "Iwu Nchebe Obodo"
Na oghere oghere, pịa "Ndepụta Nchịkwa ndepụta" ndekọ.
Họrọ ihe "Usoro Nchịkọta Nchịkwa Ọrụ Network"
Na ntinye "Nzuzo ..." anyi na-ekpughe aha netwọk "Identification Network".
Na folda ahụ, họrọ ihe "Njirimara Network"
Gwa "Ụdị ebe" ka "General".
Na nchịkọta akụkọ ahụ, gbanwere mgbanwe ahụ na "General"
Rụgharịa ọrụ ọrụ ahụ.
Mgbe nlọgharịrị, intranet ga-apụta.
Njirimara nwere ike ghara imeghe maka ọtụtụ ihe. Otu ụzọ iji dozie njehie ahụ:
Malite ndebanye Windows 7 site na itinye iwu regedit na Run menu nke Ọrụ Standard nke menu igodo Malite.
Na "Mepee" tinye iwu regedit
Na ndekọ, gaa na HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Network alaka.
Hichapụ Config parameter.
Na nchịkọta akụkọ, hichapụ Config parameter.
I nwekwara ike ime njikọ netwọk ọhụrụ wee hichaa ochie ahụ. Mana nke a anaghị eduga na nchọta ọchọrọ.
Enwere nsogbu nsogbu intranet mgbe kọmputa niile na-ehicha ma na-emeghe na adreesị IP, ma ọ bụghị otu akara ngosi ọrụ na-anọghị n'ịntanetị.
Iji kpochapụ njehie ahụ, ị ​​ghaghị ime ọtụtụ ụzọ dị mfe:
Na "Open" ubi nke "Run" panel, tinye iwu msconfig.
Gaa na panel "Nhazi System" na taabụ "Ọrụ" ma wepụ "akọrọ" site na ọrụ "Kọmputa Nchọgharị." Pịa "Mee".
Na panel, wepụ "akara" na akara "Kọmputa Nchọgharị"
N'ebe ọrụ ndị ọzọ, gbanye "Nchọgharị Kọmputa".
Gbanyụọ ọrụ niile ma kpochapụ ya.
Kwado ọrụ niile. Ngwaọrụ ma ọ bụ gbanwee ngwaọrụ gụnyere ikpeazụ.
A pụghị ịhụ ọrụ site na eziokwu ahụ dị iche iche nke Windows na arụ ọrụ dị iche iche. Enwere ike ịmepụta usoro nke intranet site na ọrụ ndị dabeere na Windows 7 na akụkụ nke ọdụ ndị na-arụ ọrụ na Windows XP. Ebe obibi ga-ekpebi ma enwere analogues na intranet na usoro ọzọ ma ọ bụrụ na otu aha netwọk ahụ akọwapụtara maka ngalaba niile. Mgbe ị na-ekekọrịta ntuziaka ndị kenyere Windows 7, ịkwesịrị ịwụnye nkedo 40-bit ma ọ bụ 56-bit, ọ bụghị ndazo ntanetị 128-bit. Nke a na-achota na kọmputa na "asaa" ahụ ga-ahụrịrị ọrụ ọrụ na Windows XP.
Mgbe ị na-enye ihe onwunwe na intranet, ọ dị mkpa ime ihe iji nweta ha ka enye ha ikike naanị maka ndị ọrụ ahụ a na-ahapụ.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe bụ itinye nbanye na paswọọdụ. Ọ bụrụ na amaghị ama paswọọdụ, emesị jikọọ na akụ. Usoro a adịghị adaba maka njirimara netwọk.
Windows 7 na-enye ụzọ ọzọ iji chebe ozi site na ịnweta ohere n'enweghị ikike. Iji mee nke a, melite òkè nke ihe onwunwe na netwọk, nke na-egosi na a ga-enye ha n'ìgwè ndị e debara aha ha. Ịdebanye aha na nkwenye nke ikike nke onye otu so na ihe omume ahụ na-ejikwa intranet.
Iji tinye ohere ịnweta paswọọdụ na ebe ọrụ, a na-arụ ọrụ ọbịbịa na ụfọdụ ikike ka enyere iji hụ na ọrụ nke netwọk netwọk.
Iji rụọ ọrụ akaụntụ, pịa akara ngosi "Akaụntụ Ndị Akaụntụ" na "Ogwe njikwa". Pịa na taabụ "Jikwaa akaụntụ ọzọ."
Na ọnyà pịa na akara "Jikwaa akaụntụ ọzọ"
Pịa igodo nleta na igodo Kwadoro iji mee ya.
Kwado akaụntụ "Ọbịa"
Hazie ikikere iji nweta ntanetị nke ọrụ.
Ịkwụsị ndị ọrụ nke ikike nnweta bụ mgbe ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ka ndị ọrụ wee ghara ịnweta Ịntanetị ma jiri oge ha na-arụ ọrụ na-agụ akwụkwọ e-akwụkwọ, ozi onwe onye site na e-mail na iji ngwa egwuregwu.
Chọta akara ngosi "nchịkwa" na "Ogwe njikwa". Gaa na ndekọ "Iwu Nchebe Obodo". Gaa na ndekọ mpaghara atumatu mpaghara wee gaa Nchịkọta Ọrụ Ọrụ.
Anyị setịpụrụ ikike nke onye ọrụ "Ọbịa"
Mee n 'nhichapu akaụntụ "Nleta" na "Nwee ike ịnweta kọmputa site na netwọk" na "Ichekwa ntinye iwu".
Mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji zoo gburugburu ebe nrụọrụ weebụ na igbochi ịnweta ya na ndị ọrụ na-enweghị ikike iji rụọ ọrụ ụfọdụ. A na-eme nke a dị ka algorithm kwuru kpọmkwem:
Na "Ogwe njikwa" gaa "Network and Sharing Center" ma mepee "Ntọala ntọala nhazi".
na "Nhọrọ nhọrọ di elu" nyochaa igbe dị na "Nchọpụta netwọk ahụ."
Na nchịkọta akụkọ ahụ, gbanye ọkụ "Gbanyụọ nchọpụta netwọk"
Ịgbasawanye usoro nchịkọta nke usoro Standard nke ọrụ menu Malite ma tinye iwu gpedit.msc.
N'ọhịa "Mepee" tinye iwu gpedit.msc
na "mpaghara Editor Policy Editor" nbanye, gaa na "Nhazi usoro" ndekọ. Mepee ndekọ "Nlekọta Ihe Nlereanya" wee gaa site na listi "Windows Components" - "Windows Explorer" - "Zoo Ntọala Nile" na "nchekwa".
В папке "Проводник Windows" выделяем строку "Скрыть значок "Вся сеть" в папке "Сеть"
щёлкнуть строку правой кнопкой мыши и перевести состояние в положение "Включено".
Izobe ma ọ bụ na-ezobe ebe netwọk bụ ihe ùgwù nchịkwa.
Ịmepụta na ijikwa ngwa intranet kọmputa bụ oge na-ewe oge. Mgbe ị na-emepụta intranet, ọ dị mkpa ịgbaso ụkpụrụ iwu ndị ahụ ka ị ghara itinye aka na nyocha na mkpochapu njehie. N'ime nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, a na-emepụta njikọ weebụsaịtị dịka njikọ nke njikọ njikọta, ma n'otu oge ahụ, intranets na-aghọwanye ewu ewu dabere na iji Wi-Fi wireless. Iji mepụta netwọk ndị dị otú ahụ, onye ga-agafe usoro niile nke ịmụ ihe, nchịkwa onwe ya na ịhazipụta njikọta mpaghara.